Igumbi eBeira Mar - I-Airbnb
Igumbi eBeira Mar
Igumbi lakho lokulala e iflethi sinombuki zindwendwe onguJessica
AYIYAYIYO IPHEPHA LONKE!
I-ap ibekwe ngaselunxwemeni, kwindawo yasePraia do canto.
Siyimizuzu eyi-15 ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwaye indawo yokumisa iBuser iphambi kwesakhiwo esingaphaya kwendlela. Imizuzu eyi-10 ukuhamba ukusuka kunxantathu kunye nokufikelela ngokulula kwezinye iindawo ezihlala kuzo. Ifulethi elilula, ngaphandle kobunewunewu, kodwa ngayo yonke into eyimfuneko ukuze uhambo lwakho lukhululeke!
Funda imisonto yentengiso ye-TDS NGOKUQHELEKILEYO ukunqanda iindudumo ezizayo.
Ndiyafumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo!
I-Apartment phambi kolunye ulwandle oluhle kakhulu eVix, ibhedi ekhululekile kunye neshawari efudumeleyo.
Ubumelwane obuphezulu kunye nolwandle oluhle, olufanelekileyo kwimisebenzi yenyama zombini ecaleni kwendlela kunye nolwandle, ineebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela kunye nomboniso wendabuko kwisikwere sabathandi ngeempelaveki. Kufuphi nokuthenga kunye nokufikelela lula kwiindawo eziphambili zesixeko.
Ndisebenza ixesha elininzi ekhaya, ngoko ke ndihlala ndifumaneka ukuba ndiphendule imibuzo kwaye ndicebise iingcebiso! Ngamanye amaxesha kufuneka ndihambe, kodwa umntu usoloko enoxanduva lokunyamekela ikati yam kunye nokugcina indlu ilungile!
Ndisebenza ixesha elininzi ekhaya, ngoko ke ndihlala ndifumaneka ukuba ndiphendule imibuzo kwaye ndicebise iingcebiso! Ngamanye amaxesha kufuneka ndihambe, kodwa umntu usoloko enox…